‘ज्ञानेन्द्र’ लेख्दैमा ज्ञानबहादुर राजा बन्छन् र ? - Dainik Nepal
विनोद ढकाल २०७६ भदौ ३१ गते ९:४९
राजतन्त्रप्रति मानिसको सोच सकारात्मक थिएन । त्यसैले राजावादी कित्तामा उभिएको तत्कालिन राप्रपा नेपालले समानुपातिक मतका आधारमा संविधानसभा निर्वाचनमा पनि जम्मा चार सीट पाएको थियो । अर्थात्, ६ सय १ जनामा चार जनामात्र राजतन्त्र मान्नेको सगोलको मत आएको थियो ।
त्यतिखेर बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, ज्ञानेन्द्र शाहीहरू लुक्नुपर्ने अवस्था थियो । कसैको नाम निशान थिएन कतै । न मिडियामा न सोसियल मिडियामा न कुनै स्पेशमा । नागरिक समाज आफैं पनि गणतान्त्रिक मानकमा उभिएको थियो । एक अर्थमा मानौ देशै गणतन्त्रमय थियो । नेकपा माओवादीको शान्ति प्रक्रियाको उदय मात्र थिएन, संविधानसभामा जनमतको भारी र क्यान्टोनमेन्टमा हतियारसहितका सेना पनि थिए । नेपालको इतिहासमा अलग सैन्य संगठन विगठन नगरी प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन् । त्यो सामथ्र्यलाई संयुक्त राष्ट्र संघको खास मिशनले मात्र स्वीकारेको थिएन, तत्कालिन राजनीतिक दलदेखि अनेक क्षेत्रले पनि स्वीकार गरेकै थियो । चुइँक्क कोही बोल्नेवाला थिएन ।
यहि सन्दर्भमा अहिले चर्चामा रहेको एउटा पाटोमाथि बहस गर्न आवश्यक ठहर्दछ । विकल्प खुला छन् । कतिपयले राजनीति र नेता छान्दा ‘मम चाउमिन रोजेको’ भनी दल दर्ता गरेर अघि बढे । तिनको राजनीतिक कर्म उदण्डता, उरन्ठ्यौला गतिमा छ त ? उनीहरू जनतासम्म पुग्न र सुसंस्कृति राजनीति गर्ने लय समात्न खोजीरहेका छन् । तर नागरिक समाज र अगुवामात्र होइन, सञ्चारकर्मीका नाममा समेत व्यवस्था माथि नै हमला गर्नु कहाँसम्मको न्यायीक मार्ग हो ? यसैमा अचम्मित, आश्चर्यचकित भइन्छ ।
यसैको शीलशीलामा ज्ञानेन्द्र शाही प्रकरण एउटा गतिलो नमूना हो । मन्त्री योगेश भट्टराईले विमान ढिलो गराएर गल्ती गरेका हुन् । त्यो गल्ती गरेको विषयमा चर्चा हुनु अस्वभाविक बनि होइन । तर, मन्त्रीको हुर्मत लिएर सामाजिक सञ्जालमा ‘मन्त्रीलाई रामधुलाई गरियो’ भनेर लेख्ने आत्मरतीसँग सती जान सकिन्छ त ? गल्ती देखाउने शालिना, भद्रता, त्यसको तर्कशील पाटो हुन्छ । मन्त्री गल्ती मानिरहेका छन् त्यसको सजाय नागरिकस्तरबाट होला पनि । तर, अझ पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘बिग इश्यु’ बनाउने दुश्साहस, त्यतिमात्र पनि होइन, सवालजवाफमा ठाडो ठाडो उत्तर । प्रश्नको उत्तर प्रतिप्रश्न गरेर दुनियाँलाई आफूमात्र ठिक, अरु बेवकुफ भनी देखाउन खोज्नुको तुक के हुन्छ र ?
दुनियाँमा सरकार गठन भएपछि विधिअनुसार ५ बर्ष चल्न दिने प्रावधान छ । लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको जगमा सरकार उभिन सक्ला । उसका गल्ती कमजोरीको खबरदारी पनि गर्न पाइन्छ । तर, भर्खरै स्थापित हुन खोजेको व्यवस्थाकै घाँटी निमोठ्नका लागि व्यक्तिका चरित्र हत्या गर्दै सभा र सम्मेलन गर्ने कथित विद्वान भनेका प्रायोजित भन्दा अर्को अर्थमा बुझ्न सकिँदैन । न्यायीक विषयमा बोल्दा कुनै पनि आम नागरिक, कार्यकर्ता वा कसैले आक्रमण गर्र्दैन । भीडमा उभिएर अरुको हुर्मत लिँदा हुने हुलहुज्जतप्रति सचेत नहुने नागरिक अगुवा हुँदैन । हुलहुज्जतमा अरु नपर्ने शाही मात्र किन पर्ने ? अरु सामाजिक अभियन्ता छैनन् ?
यो पृष्ठभूमीलाई जोड्नु यहाँ उक्ति होला, शाहीका लागि । राजा ज्ञानेन्द्र र ज्ञानेन्द्र नाम राखेका ज्ञानबहादुर शाहीमा धेरै फरक छ । दुई सय ४० बर्षको विरासत मात्र होइन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र सबैको मुख्य चालक भएर हिँडेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकको आवश्यकता, अपरिहार्यता र मनोविज्ञान प्रस्ट जानकारी छ । तर नागरिकमा द्वेष, रिस, आवेग र त्यो भिँडमा आफ्नो औचित्य खोज्ने ज्ञानबहादुरहरू प्रविधिको बलमा उचालिएका उल्लूहरू हुन् । जो, अँध्यारोमा मात्रै बर्बराउन जानेका भेटिन्छन् । अहिले राजनीतिक अवस्था अन्धकार जस्तो भएका बेला बर्बराएका हुन् । यीनिहरू सपनाबाट झल्यास्स हुँदा चेतमा आउनेछन् अनि ठान्नेछन्– ‘ज्ञानेन्द्र’ नाम लेख्दैमा राजा हुन सकिँदो रहेनछ । राजा हुनका लागि त राजनीति र व्यवस्थाका प्रत्येक घामपानी सहनुपर्ने रहेछ !